HOGAAMIYAHA U KEENA HORUMAR XISBIGA, MAAHA IN SIDII DUMARKA LA YIDHAAHDO WAAN KU WALACNAYE HALA BADALO | WWW.SOMALILAND.NO
HOGAAMIYAHA U KEENA HORUMAR XISBIGA, MAAHA IN SIDII DUMARKA LA YIDHAAHDO WAAN KU WALACNAYE HALA BADALO
“Salaadiinta Somaliland badankoodu umadda uma hadlaan, waxay u hadlaan dan gaar ah”
“Waxay ahaayeen (Xubnaha Wakiillada ee ka baydhay Ucid) dad aanu fursad uun siinay oo reerahoodii ay yidhaahdeen waanu sharaxaynaa kuna orday tigidhka UCID. Laakiin, may ahayn..”
Hargeysa (sl.no)- Gudoomiyaha Golaha Wakiillada oo hogaaminaya wefti ka kooban Xisbiga UCID oo uu ka mid yahay Gudoomiyaha Xisbigaasi Eng. Faysal Cali Waraabe ayaa booqasho ku jooga magaalada Washingting DC ee wadanka Maraykanka, Islamarkaana weftigu mudadii ay halkaa joogeen waxay kulamo kala duwan la yeesheen madax ka tirsan dawlada Maraykanka oo ay ka mid tahay Kaaliyaha xoghayaha Arrimaha Dibadda u qaabilsan Afrika Jenday Farazar.
Gudoomiyaha UCID ayaa waraysi safarkooda la xidhiidha siiyay shalay Idaacada VOA laanteeda Afsoomaaliga. Ugu horayna waxa la waydiiyay inuu faahfaahin ka bixiyo ujeedada socaalkooda, waxaana uu ku jawaabay: “Socdaalkayaga danta Qaran baa ka Kow ah, Xisbiga UCID meelo badan oo aanay dawladu gaadhin baanu gaadhnaa, Xildhibaano badan baanu leenahay adduunka, gaar ahaan wadamada Yurub, hadda waxay aqoontayadu ku fiday Maraykanka iyo Kanada. Markaa waxaa wax kasta ka horeeya sidii qadiyada Somaliland aanu u horumarin lahayn, sida hada jirta ee ah rajada way nee isbedelka in aanu ka faa’iidaysano in anaan ku helayn dawlada oo keliya ee annagana Axsaab ahaan codkayaga waa la maqlayaaye inaanu kordhino ayaanu u nimi.”
Waxa kale oo Faysal Cali Waraabe la waydiiyay su’aal ahayd ma la odhan karayaa tani olalaha doorashaday ka mid tahayoo, sidii dadka aad cod uga heli lahaydeen baa u timaadeen Maraykanka? Waxa uu yidhi: “Way garab socotaa maadaama aanu jahliyadahayagii la socono, oo jaaliyadaha dibaduna ay saamayn wayn ku leeyihiin siyaasada gudaha, dhaqaalihiisa iyo horumarkiisaba. Markaa in aanay gacmaha ka laaban doorashada soo socota gacantoodii ay hore uga gaysan jireen ay laban laabaan. Warka dalka yaalana waanu uga waranaa, warka xun baa soo horeeya oo dadka niyada jabiya. Markaa waxaanu jecelahay inaanu uga warano sidii caadada noo ahaan jirtay.” Ayuu yidhi.
isaga oo ka jawaabayay intaa macnaheedu tahay inay Xisbiga UCID taageero u doonayaan uun waxa uu yidhi: “Kama madhna, qaddiyada ayaanu sheegaynaa , isbedelkaanu doonaynaa oo UCID u taagan tahay inaanu sheegno weeye. Xisbiga UCID wuxuu ku bilaabmay jaaliyadaha dibadda weeye, dadka waanu iska xignaa. Hadana waxaanu toos u soo bandhigaynaa waxa weeye isbedel in shanta sano ee soo socda xisbi ahaan baratanka doorashooyinka aanu soo bandhigi doono Insha Alaah.
Mar uu ka hadlayay xisbi ahaan rajada ay qabaan doorashooyinka waxa uu sheegay inay aad ugu hanwayn yihiin in hogaanka dalku gacanta u galo.
Waxa kale oo Faysal Cali Waraabe la waydiiyay khilaafaadka soo kala dhex-galay mudaneyaashii Golaha Wakiillada ee ka soo baxay UCID iyo in taasi wax dhaawac ah u gaysatay. “Waxba namay yeelin, marka horeba dad badan Baarlamanka uun noogu yimi oo marti ahaa bay ahaayeen ee may ahayn dad xisbiga ka tirsan. Waxay ahaayeen dad aanu fursad uun siinay oo reerahoodii ay yidhaahdeen waanu sharaxaynaa, isla-markaana ku orday tigidhka UCID. Laakiin, may ahayn dad saamayn ku leh Xisbiga, marnaba iskuma qoomamayno Xisbi ahaan”
Mar uu ka hadlayay wakhtiga kooban ee ka hadhay doorashooyinka iyo sida looga gaadhsiin karo diiwaan-gelinta waxa uu yidhi: “Diiwaan-gelintu waa arrin loo baahan yahay, halkaanu ka tegi lahayn doorasho laysku qabqabsado oo dhiig ku daato, waxaanu jecelahay in aanu helo doorasho wanaagsan oo nidaamsan, isla-markaana adduunka la jaanqaada dib-u-dhaceedana waxa ka masuul ah cida keenta. Doorashana dhici mayso ilaa aanu diiwaan-gelin samaysano, sababtoo ah taasaa noo ah furaha doorashooyinka. Waayo, nabadgelyadayadaa ku jirta, adduunkana kama duwanin oo la mid baanu nahay oo sidaasuu ku dhaqmaa.”
Gudoomiyaha UCID waxa uu ku dooday inaan wax duruufo ah oo ka horimanayaa jirin in la sameeyo diiwaan-gelinta inkasta oo ay jiraan cabashooyin arrintaa ku saabsan oo gobollada qaar ka soo yeedhay. “Had iyo jeer innagu waxaynu necebnahay nidaamka. Nidaamkay diidayaan, dad reer guuraaga ah ee laguu sheegayo wax laga yaabaa in reerkii kasta ee reer guuraa ah Hal qof ka footeeyo. Markaad eegtid rikoodhkii doorashooyinkii hore ee dadka reer guuraaga ahi 5% kamay noqonayn dadka codkooda bixiyay. Arrintanina waa arrin loo baahan yahay in Suldaan ka hadlana maaha doorashada, waxaanay ku tusaysaa inaanay Hay’adaheenii adkaanin. Suldaankuna meelna ma xukumo ee dan gaarkiisa ah ayuu u hadlayaa. Salaadiinta Somaliland badankoodu umada uma hadlaan, waxay u hadlaan dan gaar ah. Markaa waxaanu leenahay kaa dawladu talaabo ha ka qaado, waxanina waa dantii umadda, danta umadana cidina isma hortaagi karto”Ayuu yidhi Gudoomiyaha UCID
Faysal Cali Waraabe waxa kale oo wax laga waydiiyay aragtidiisa ku wajahan furashada Ururada siyaasada, waxaana uu ku celiyay inaan wakhtigan sharcigu ogolayn. “Anagu waxaanu caddaynaynaa iminka in sharcigu sheegayo Saddex Xisbi oo keliya dalku yeelanayo. Maaha in xabad laysku qabto oo la yidhaahdo ilowba ilow ha la furo (Ururada). Waa laga doodi karaa ma la furaa iyo yaan la furin. Waxa laga doodi karaa oo kale habkan Madaxweynuhu ma ina anfacay mise inamuu anficin Guurtida maxaynu ka yeelaa arrimo badan baa u baahan, dastuurkaa ka mid ah oo qabyo ah. Laakiin maanta sharciga yaala Saddex Xisbi uun buu ogol yahay, waanay ogyihiin ragga leh waanu ku dhawaaqaynaa ee way badheedhayaan.” Ayuu yidhi.
Waxa kale oo la weydiiyay aragtidiisa ku wajahan dadka qaba in Axsaabta hogaamiyayaashoodu is badalaan hadba waxana uu ku jawaabay oo uu yidhi “Mushkilada ina haysataa waxa weeye, nin kastaaba waxa uu ka talinayaa waxaanu garanayn. Suldaanku kiiyoo beeshiisii Baylihiyay ayuu siyaasadii aanu anagu u banbaxnay uu ka hadlayaa, Hogaamiyaha xisbiga waxa lagu badalayaa haduu keeni waayo horumar. Aduunkaba waa la badalaa ama isagaaba is casila. Laakiin, hadii qofku u keenayo horumar xisbiga maaha in sidii dumarkii walici jiray la yidhaahdo waan ka walacnaye hala badalo ma soconayso.”
« Koox Khatar Ah Oo Boosaaso Loogu Soo Tababaray Been Abuurka Lacagaha Oo Lagu Qabtay Hargeysa SIDEYNU KU SOCONO SADDEXDA XISBI SADDEXDOODA HOGAAN BAY U XIDHAN TAHAY SIYAASADII, SIDAASINA DIMUQRAADIYAD MAAHA »